Zencastr: Nyore Rodha Podcast Kubvunzana Pamhepo | Martech Zone
China, Kurume 2, 2017 NeChishanu, Kurume 3, 2017 Douglas Karr
Shamwari uye tenzi wekugadzira wezvose zviri podcasting ndiJen Edds anobva Brassy Broadcasting Kambani. Ini handiuye kumuona kazhinji, asi kana ndichimuita zvinogara zvichiseka. Jen mumwe munhu ane tarenda - anoseka, iye muimbi ane tarenda uye muimbi, uye ndomumwe wevanyanzvi vane ruzivo vandinoziva. Nekudaro, hazvina kushamisika paakagovana chishandiso chitsva neni icho chingangonakidze imi vanhu - Zencastr.
Kana iwe uri veteran podcaster, mikana ndeyekuti iwe unayo chisanganiso bhodhi uye neseti huru yemakrofoni nemahedhifoni. Kana iwe uri mutsva podcaster, iwe unogona kunge uine digitaalinen chisanganiso. Iko kuoma kunotanga kana iwe uchida kuunza vari kure vashanyi. Isu takashongedza yedu Indianapolis podcast studio ine Mac Mini uye vaviri USB odhiyo maficha ekuburitsa Skype kana chero imwe odhiyo mune yedu musanganiswa.
Kunyangwe izvozvo zvichigadzirisa tekinoroji, iwe uchafanirwa kuisa waya yako musanganisi kana kuronga musanganiswa wedhijitari kuburitsa yako mu-studio vanhu kubhazi kune vako vepamhepo vanhu. Uye iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti haubatanidze kumashure izwi remuenzi wako neimwe nzira, vashanyi vako vepamhepo vanonzwa maungira. Hausi iwe chete une idzo nyaya, asi mazhinji epamhepo ekutaurirana zvirongwa (senge Skype) clip uye kudzikisira odhiyo. Zvakafanana nekunzwa mumwe munhu achifona muchiteshi cheredhiyo pafoni yake.
Wakawana zvese izvo here? Hongu… zvave zvinoshungurudza dzimwe nguva. Ini ndaishanda neveko injinjini yekuteerera Brad Shoemaker uye Behringer mainjiniya kuti zvese zvishande nemazvo uye isu takaedza neboka rezvekuteerera mapuratifomu ekuchenesa online kurekodha.
Ehe, iwe haudi chero cheizvi kubvira Zencastr ari pano! Nepo paine mamwe mapuratifomu epamhepo ekurekodha - senge BlogTalkRadio (isu takasiya nekuti taisakwanisa kunyora zvemhando yepamusoro odhiyo online), Zencastr inopa mhando yepamusoro yekurekodha uye yakavakirwa podcast iyo inogona kuve nevashanyi vakati wandei vanobva kunzvimbo dzakasiyana.
Zencastr yakafanana nekuva nerekodhi mumakore, uye kunyange ine mashoma masimba ekuvhenganisa:
Nzira Yakaparadzaniswa Neye Muenzi - Zencastr inorekodha izwi rega rega munharaunda mune pristine mhando. Hapasisinazve kusiiwa nekuda kwekubatana kwakaipa. Hapanazve shanduko muhunhu panguva yekuratidzwa. Hapana chinhu kunze kwekristaro yakajeka odhiyo.
Record in Lossless WAV - Usakanganise pahunhu. Zencastr inorekodha vashanyi vako vasina kurasikirwa 16-bit 44.1k WAV kuitira kuti iwe utore yakanakisa odhiyo odhiyo yekushanda nayo.
Soundboard Yekurarama Kugadziriswa - Isa yako intro, shambadziro, kana imwe audio mhenyu sezvaunonyora Izvi zvinokusevha iwe nguva inotora kugadzirisa izvi mukati munguva yekugadzirwa.
Yakavakirwa-muVoIP (Izwi pamusoro peIP) - Hapana chikonzero chekushandisa chechitatu-bato sevhisi seSkype kana maHangouts. Iwe unogona kutaura nenzwi nevashanyi vako zvakananga kuburikidza neZencastr.
Otomatiki Kuburitsa - Gadzira imwe chete yakavhenganiswa track ine curated odhiyo zvinowedzera zvinoshandiswa kushandura kurekodha kwako kuve nyanzvi yekusanganisa yakagadzirira kutsikisa.
Cloud Dhivha Inosanganisirwa - Zvako zvakarekodhwa zvinounzwa otomatiki kuDropbox account yako kuti zvive nyore kugadzirisa uye kugovana. Google Drive iri kuuya munguva pfupi.
Hei… uye kana iwe uchangotanga, Jen akaisa pamwechete yakazara kosi pa kutanga yako podcast izvo zvinofanirwa!
Iyo Brassy Broad's Brass Inotakura Pod-Kirasi
Tags: behringerdigitaalinen chisanganisomuvhenganisipodcastingzencastr
Ecrebo: Kuita Yako POS Zvakaitika